Lionel Messi & Luis Suarez oo la sheegay kooxda ay markale dib ugu midoobi karaan – Gool FM
Haaruun May 24, 2022
(Madrid) 24 Maajo 2022. Messi iyo Suarez ayaa muddo ay ka wada tirsanaayeen Barcelona, waxa ay markale dib ugu midoobi karaan Kooxda Inter Miami ee dalka Mareykanka.
Labadaan laacib ayaa guul waa weyn si wadajir ah ugu soo qaatay kooxda Barcelona, waxaana hadda la la xiriirinayaa inay u wada dhaqaaqi doonaan dhinaca horyaalka MLS-ka Maraykanka.
Luis Suarez ayaa qiray in suurtagalnimada uu Lionel Messi kula midoobayo Inter Miami ay wax weyn u tahay isaga, xilli weeraryahanka Atletico Madrid uu ka fikirayo dhaqaaqiisa xiga kaddib ka bixitaankiisa garoonka Wanda Metropolitano.
Suarez iyo Messi waxa ay Barcelona ku wada qaadeen koobab badan intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2020 oo ay ku jiraan afar horyaal oo La Liga ah iyo Champions League.
Weeraryahan Suarez ayaa xaalad aan wanaagsanayn oo qalafsan kaga tagay Camp Nou, inkastoo uu labadii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay la qaatay Atletico Madrid, halka Messi uu haatan dhammeystay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee Paris Saint-Germain – iyadoo Barca ay awoodi weysay inay u gacan geliso qandaraas cusub sanadkii hore.
Muxuu Suarez ka yiri Messi?
Suarez ayaa si xor ah kaga tagi doona Atletico 30-ka June, waxaana si xooggan loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo horyaalka MLS-ka, iyadoo la soo jeediyay inuu jeclaan lahaa inuu waayihiisa ciyaareed ku soo afjaro Mareykanka kaddib markii uu 35 jirsaday.
Warar kuwaas la mid ah ayaa ka soo baxayay dhanka Messi, iyadoo Inter Miami lagu tilmaamay inay tahay meel ay ku soo wajahan yihiin labadan xiddig, Suarez ayaana soo dhaweynaya fursad uu markale kaga garab ciyaaro saaxiibkiisii hore.
“Messi oo ku sugnaa Miami dhowr sano gudahood? waan ku rajo weynahay, gudaha iyo dibadda garoonka waxaan ku fiicneyn si wadajir ah,” ayuu yiri xiddiga Uruguay mar uu ka soo muuqday barnaamijka ka baxa Warbaahinta Cadena Ser ee ‘El Larguero’ show.
“Ma jirto wax ka fiican inaan arko labadeenna saaxiib oo ku faraxsan dibadda si la mid ah sida ay gudaha garoonka ugu soo bandhigaan.” ayuu hadalkiisa ku daray.